सुनचाँदी सञ्चित गर्ने मालामाल, अचाक्ली बढ्यो भाउ Bizshala -
यसकारण छायो बजारमा हरियाली,३३ कम्पनीका लगानीकर्ताले ५ % भन्दा बढी कमाए
सुनचाँदी सञ्चित गर्ने मालामाल, अचाक्ली बढ्यो भाउ
काठमाण्डौ । पहेँलो धातुु सुनको भाउ केही दिनदेखि अचाक्ली बढ्न थालेको छ । बिहीबार एकैदिन प्रतितोलामा ५ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको भाउ शुक्रबार पनि थप ५ सय रुपैयाँले बढ्यो ।
बिहीबारसम्म ५४ हजार ९ सय प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको सुनको भाउ शुक्रबार बढेर ५५ हजार ४ सय रुपैयाँ पुुगेको हो । सुनसँगै चाँदीको भाउ समेत बढेको छ । बिहीबार ७ सय ५० रुपैयाँ प्रति तोलामा किनबेच भइरहेको चाँदीको भाउ बढेर शुक्रबार ७ सय ५५ रुपैयाँ पुुगेको छ । सुन र चाँदीको शुक्रबार कायम मूल्य साउन महिनाकै उच्च हो ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच बढ्दो तनावका कारण अन्तराष्टिय बजारमा भाउ बढेको र त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत परेको हो । यी दुुई देशबीचको बढ्दो तनावले राजनीतिक वातावरण बिग्रिएर यसको प्रभाव लगानीका अन्य क्षेत्रमा समेत परेको छ । सेयर तथा डलरमा लगानी गर्नेहरु समेत संभावित जोखिमबाट जोगिन ती क्षेत्रको लगानी झिकेर सुनमा लगानी बढाउन थालेका छन् ।
यहीकारण सुनको माग उच्च भई मूल्यमा समेत लगातार वृद्धि भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार अन्तराष्टिय क्षेत्रमा सुनको भाउ अझ माथि जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसकारण सुनको भाउ अझ बढ्नेछ । योसँगै तिजको समयमा समेत नेपालको आन्तरिक बजारमा सुनका गरगहनाको माग बढ्ने हुँदा यसबाट समेत मूल्यवृद्धिमा थप टेवा पुुग्नेछ ।
यसकारण छायो बजारमा हरियाली,३३ कम्पनीका लगानीकर्ताले ५ % भन्दा
काठमाण्डौ । निकै लामो समय ओरालो यात्रा हिँडिरहेको सेयर बजारमा...
काठमाण्डौ । अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख रहेको र सेयर बजार समेत...
रिसाएका लगानीकर्ताबीच मेगाको सेयर बिक्रीको होड, मूल्य घटेर
काठमाण्डौ । करिब ५०० दिनसम्म आफ्नो लगानी बन्धक बनाउने मेगा...
यी कारणले बजारमा एकाएक देखियो उत्साह
बजार किन घट्दैछ ? अर्थमन्त्रीले दिए २ कारण
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा...
स्वाबलम्बनको रु.१३०० को सेयर ७२८ मै पाउँदा समेत किन परेन आवेदन
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता १ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्य...
बजेट प्रतिक्षाले नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, बजारबाट किन
काठमाण्डौ । बजेटको व्यग्र प्रतिक्षामा बसेका लगानीकर्ताहरुले सेयर...
नेकोको २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, कसले दिन पाउँछ
काठमाण्डौ । कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमीटेडले नेको इन्स्योरेन्स...